नेपाली पाइलटले नै बुझ्छन् विदेशी पाइलटले भन्दा धेरै तलब ! कति बुझ्छन् ? हेर्नुहोस् ! – MEDIA DARPAN
नेपाली पाइलटले नै बुझ्छन् विदेशी पाइलटले भन्दा धेरै तलब ! कति बुझ्छन् ? हेर्नुहोस् !
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १५ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:०८
काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले विदेशी विमानचालक (पाइलट) ले भन्दा नेपाली पाइलटले धेरै तलब बुझ्ने गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण विदेशी पाइलटलाई बेतलबी विदादेखि करार अवधिसमेत छोट्याएसँगै नेपाली पाइलटको न्यूनतम तलब बढेको हो ।
लामो दुरीको यात्रामा ‘मोशन सिकनेस’बाट कसरी बच्ने
सार्वजनिक यातायातको मनपरी: सामान्य अवस्थामा जसरी नै यात्रु कोचेर चर्को भाडादर !